MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: မုဒိန်းကျင့်ခံရသော ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီး အပိုင်း (၂) လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် ကလိန်ကျပုံများ
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့ နေခင်း (၂) နာရီတွင် ကျနော်တို့ မြစ်ဆုံ လုပ်ငန်း အကောင်ထည်ဖေါ်ရေးအတွက် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်မည် ဘန်ကာ BANCA နှင့် တရုတ်ဘက်မှ စီပီအိုင် ကုမ္မဏီတို့ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးကာ နိုင်ငံတကာမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမည့် အီးအိုင်အေ အတွက် လေ့လာရေးကို စတင် အကောင်ထည်ဖေါ်ကြပြန်သည်။ (၂၀၀၉) ခုနှစ် ဇန်နာဝရီလမှ ဇွန်လအထိ တရုတ်မြန်မာ အဖွဲ့ပေါင်း ၁၁ ဖွဲ့မှ လုပ်ငန်း အကောင်ထည်ဖေါ်ရန်နောက်ဆုံး လေ့လာစူးစမ်းမှုများ အပြီးသတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ကြရာတွင် တရုတ်ဘက်မှ စီပီအိုင် (China Power Investment) မှ ၄င်းတို့ တွေ့ရှိချက်များအား အထူးအစည်းဝေးခေါ်ယူကာ တင်ပြကြ၏။ တင်ပြချက်ထဲတွင် ကုမ္မဏီ၏လုပ်ငန်း စတင်အကောင်ထည်ဖေါ်ချိန်မှစပြီး လုပ်အားနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အားလုံး အရှုံးဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နိုင်စရာ အကြောင်း မရှိကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ချိန်မှစကာ ကုမဏီအဖို့ မျှော်လင့်မထားသော အကျိုးမြတ်ကြီးများ ရရှိနိုင်ကြောင်း ၄င်းတို့ စာတမ်းတွင် ဖေါ်ပြသည့်အတွက် တရုတ်ပြည်မ အစိုးရကိုယ်တိုင်ပင် အထူးစိတ်ဝင်စားကာ တရုတ်ပြည်၏ သစ်တောရေးရာ (မြောက်ပိုင်းဒေသ) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ကြီး( လျံချီပင်း) အား စီပီအိုင်၏ လုပ်ငန်းများအား ပူးတွဲပါဝင်ကြီးကြပ်ရန် သံဗာန်စာဆင့်ထုတ်ကာ ညွန်ကြားခဲ့သည်။
အကြောင်းမှာ မေခ မလိခ မြစ်နှစ်သွယ် ဆုံမိစီးဆင်းသည့် အိုင်ကြီးသည် အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားသော ရွေနှင့် အခြားဓါသတ္တုပစ္စည်းများ ရရှိသေခြာကြောင်း၊ လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ဆောင်သော အချိန်မှစပြီး လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည့် အချိန်ထိ ရွှေနှင့် တန်ဘိုးကြီး ဓါတ်သတ္တု ခန့်မှန်းခြေ တန်ပေါင်း ( ၅၀၀၀) နှင့် ၁၀၀၀၀ သောင်းအကြား တပါတည်း ရရှိတူးဖေါ်နိုင်ကြောင်း အပြင် ဒေသတွင်းရှိ ရှင်းလင်းပယ်ဖျက်ရန် သစ်တောကြီးများမှ သစ်တန်ချန်း (၂သန်းမှ ၇)သန်းထိ ရနိုင်သည့်အပြင် တန်ဘိုးရှိသော ရှားပါး သစ်ခွ နှင့် အခြားသော မျိုးစေ့ မျိုးဆက် အသစ်ဆန်းများ ရရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း အား အသေးစိတ် ဓါတ်ပုံများနှင့်တကွ တင်ပြခဲ့သည်။
အထက်ပါ အစီရင်စာ အား ၂၀၀၉ခု ဂျူလိုင် လ ၆ ရက်နေ့ တွင် တင်ပြခြင်းကြောင့် တရုတ်ပြည် ယူနန်ဒေသ အာဏာပိုင်များပင်မက ပြည်မ အာဏာပိုင်များပါ အထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်သို့ တရုတ်ပြည် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ၀န်ကြီး အလည်ပတ်ရောက်ရှိလာပြီး အနားယူသွားသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် မြန်မာ စီးပွားရေးသမားများ ခရိုနီများအား အထူးမက်လုံးပေးဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်ကို လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အနားယူသွားသော (ပြည်ပြောင်အောင်ရောင်းစားခဲ့သူများ) ဖြေနိုင်လျှင် တိတိပပ ဖြေရှင်းစေချင်သည်။
ထို့ကြောင့်(၂၀၀၉ ခုနှစ် စတင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်) မြန်မာ အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေဦးဆောင်သော ၈၁ ယောက်ပါသည့် မြန်မာကိုယ်စာလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ပြည်သို့ လိုက်ပါပြီး တရုတ်ပြည်မှ “မဟာ ပြည်သူ့ရင်ပြင် အဆောက်ဦး” တွင် ကော်ဇောနီးခင်း ကာ တရုတ်ပြည်မှ သမ္မတ ဟူဂျင်တောင်း က ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လော့အိန်ဂျလိ တိုင်းမ် သတင်းစာမှ အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားတင်ပြထားသည်။
Once again, the head ofanation viewed asapariah in the West had come to China to court favor, legitimacy and money, eliciting criticism that Beijing is coddling repressive regimes.
This time it was Senior Gen. Than Shwe, leader of the generals who rule Myanmar. The 77-year-old on Wednesday receivedared-carpet welcome at Beijing's Great Hall of the People. (Los Angeles Times)
ထိုသုိ့ဗိုလ်ချုပ်ရူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ခ၇ိုနီတို့၏ တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်တွင် တရုတ်ဖက်မှ မြစ်ဆုံလုပ်ငန်း အပါဝင် အခြားသော အကြောင်းရာများ (၁၃) ခုအား အဖြေခိုင်ခိုင်မာမာရရှိအောင် တရုတ်တို့ဘက်မှ အင်တိုက်အားတိုက် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး လက်မှတ်ပေါင်း ( ၄၃) ခုအား မြန်မာဘက်မှ ထိုးပေးခဲ့ကြောင်း စာရေးသူတွင် ခိုင်လုံသော သက်သေအထောက်ထားများ လက်ဝယ်ရှိနေပါသည်။( မှတ်ချက်) ဦးသန်းရွှေနှင့် တိုင်းပြည်အလွဲသုံးစား လုပ်သူများအား တရားဥပဒေအရ ခုံရုံးတင်မည်ဆိုလျှင် စာရေးသူအား သက်သေအနေဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ရူးကြီး သန်းရွှေမှ လက်မှတ်ထိုးသဘောတူသော အချက်များတွင် တရုတ်တို့ လိုလားတောင်းတသော အချက်လက် ကို ရရှိသွားကြလေ၏။ ၄င်းအချက်လက်မှာ မြစ်ဆုံဒေသရှိ နယ်မြေရှင်းလင်း တည်ဆောက်သော ကာလ၀ယ် အသုံမ၀င်သော သစ်မာနှင့် မြစ်ဆုံဒေသ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် ဖယ်ထုတ်စွန့်ပစ်ရမည်ဖြစ်သော မြေသားများအား တရုတ်တို့ဘက်သို့ တိုက်ရိုက်သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး အပါဝင် လိုအပ်လျှင် တရုတ်တို့ဘက်မှ လုံခြုံရေး အစီမံများ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန်ဖြစ်လေသည်။
ထိုသဘောတူညီချက်အား ယခု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအား တိုက်တွန်းရှင်းပြခဲ့သည်ဆိုသော သတင်းအချက်လက်သည်ပင် စာရေးသူတွင် ရှိပါသည်။ ထိုကိစ္စအရပ်ရပ်အား အကွက်ကျကျ စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ယခု အနားယူသွားသည့် ဒုတိယ သမ္မတ တင်အောင်မြင့်ဦး နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (အရက်သမား) မောင်အေးတို့အာ အေးရှဝေါလ်နှင့် စီပီအိုင်တို့မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း (၃၀၀) လက်ဆောင်ပေး အပ်နှင်းခဲ့သည်ကို အေးရှဝေါမှ လက်မှတ်ထိုးပွဲအား တာဝန်ယူခဲ့သော တာဝန်ခံအရာရှိ၏ ဖွင့်ဟချက် သက်သေ အခိုင်မာရှိပါသည်။
ထိုကြောင့် မြန်မာလျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ( ခရစ်စတီးကျွန်း အရပ်သာ ၈၂ သတ်ဖြတ်မှုတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သူ) ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းမှ မည်မျှကန့်ကွက်စေကာမူ ကျုပ်တို့ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ဟု အတိလင်း ကြေငြာချက်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းအား နိုင်ငံတကာ မြစ်ချောင်းများ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့မှ အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြပါသည်။
China's role in Burma's hydropower development projects was sealed in an agreement between Burma's Ministry of Electric Power and China's National Energy Administration in March 2009.
Burma's Electric Power 1 Minister Zaw Min on September 11, 2011 inapress meeting said that the Myitsone project will continue to be built despite protests from domestic and international civil and environmental groups.
တရုတ်တို့ လိုချင်သော ကိစ္စရပ်များရရှိပြီးနောက် မြစ်ဆုံလုပ်ငန်းအား အားတိုက်အင်တိုက် ပြုလုပ်ကြလေတော့သည်။ မြစ်ဆုံလုပ်ငန်းအား မြန်မာဘက်မှ တာဝန်ယူ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသူ အေးရှဝေါလ်ကုမ္မဏီမှ တက်သုတ်ရိုက်ကာ အလျှင်သလို အကောင်ထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်၇ာတွင် (၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် တရုတ်ပြည်ဘက်မှ မြန်မာပြည်၏ ဧရာဝတီ မိခင် ဖခင်အား စတင် သတ်ဖြတ်၇န် စက်ယန္ဒယားပေါင်း ( ၁၀၃၂) ခု အားစတင်ဝင်ရောက်လာတော့သည်။
၄င်းဒေသတွင်းရှိ ရွာပေါင်း ၆၃ ရွာ နှင့် လူဦးရေပေပေါင်း ၂ သောင်း ၆ထောင်မှ ၃၈၀၀၀ အကြား ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရသော အရေတွက်အား အဓမ္မ ဖြင့် သေနတ် ပြောင်းများ ခေါင်းပေါ်ထောက်ကာ ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းကြောင်း စာရေးသူမှ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနသို့ တိကျသွာပေးပို့ပြီး တင်ပြခဲ့ရာ ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ တရားဝင် ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
ဘိန်းကုန်ကူးရေး ခေါင်းဆောင် လော်စစ်ဟန်၏ အေးရှဝေါလ်ကုမ္မဏီနှင့်ပတ်သက်သော ငွေလျော်ဖွတ်သည့် လုပ်ငန်းတခု အကြီးအကျယ် ငွေလျော်ဖွတ်ခွင့်ရလိုက်သော အကြောင်းရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ တိုက်ရိုက်ပါဝင် ပတ်သက်မှု ၊ တရုတ်တို့ဘက်မှ မြစ်ဆုံအား စတင် မုဒိန်းကျင့်ကြပုံများအား ကျနော်၏ အပိုင်း (၃) တွင် အသေးစိတ် ဆက်လက်တင်ပြပါမည် ။
at 8/01/2013 11:28:00 AM
မုဒိန်းကျင့်ခံရသော ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီး. (အပိုင်း ၁)